Gudoomiyaha Gollaha Shacabka Maxamed Cismaan Jawaari oo eedeeyay Farmaajo
MUQDISHO, Soomaaliya - Gudoomiyaha Gollaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Cismaan Jawaari ayaa qabtey Shir jaraa'id kaasi oo kaga hadlay Xaaladda Khilaafka Siyaasadeed ee dalka ka jira iyo Mooshinka laga keenay.
Jawaari ayaa diiday inuu is-casilo, isagoona dhanka kale ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo iyo Xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre inay ka dambeeyaan Khilaafka taagan iyo qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira wadanka.
"Xildhibaanada Gollaha shacabka waxay mudo ka shaqeynayeen inay ka fogaadaan fowdo iyo buuq, waxaana ogolaanay waxkasta oo suurtagal ah oo lagu xalinayo Khilaafka, iyadoo aan ogolaano dhamaan qodobadii noo soo jeediyay Gudiga Aqalka Sare ee dhex-dhexaadinta Khilaafka," ayuu yiri Jawaari.
Gudoomiye Jawaari ayaa tilmaamay in garabka Xildhibaanada isaga kasoo horjeeda, oo uu sheegay in Xukuumadda Khayre ay gadaal kasoo riixayso ay diideen in wadahadl lagu dhameeyo Khilaafka Siyaasadeed.
Jawaari ayaa ku celiyay go'aankiisa inuusan is-casilin, iyadoo uu Xukuumadda ku eedeeyay inay waajibkeeda gabtey, oo looga baahan yahay inay is-casisho, maadaama khalalaasaha iyo fowdada taagan ay sida uu sheegay ka dambayso.
"Xukuumadda waa in iyada is-casishaa maadaama ay abuurtay Khilaafka Siyaasadeed ee taagan. Isma-casilaya, Isma-casilayo, Isma-casilayo, waxaana ku imid sharci, sharci ayaan ku baxayaa," ayuu yiri Jawaari.
Waxa uu tilmaamay in go'aanka Xukuumadda ee ah inaysan la shaqeyn karin Jawaari ay micnihiisu yahay in iyada uu u shaqeeyo, taasina ay ka hor-imaanayso dhaartii uu u maray inuu shacabka Soomaaliyeed u shaqeeyo.
Dhanka kale, Gudoomiye Jawaari ayaa Madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay inuu dhinac la saftay, oo uusan dhex-dhexaad ka ahayn Khilaafka taagan, kadib markii uu sida sheegay u fasaxay Xildhibaanada keenay Mooshinka inay qabtaan berri shir isaga xilka looga qaadayo.
"Sida muuqata in Madaxweynaha isaga ayaa soo fasaxay shir la qabanayo Berri, waxaana u cadeynayaa umadda Soomaaliyeed in wixii dhibaato ah ee ka yimaada arintaasi uu isaga mas'uul ka noqonayo," ayuu yiri Jawaari.
Ugu dambeyntii Jawaari ayaa ugu baaqay Culimada Soomaaliyeed, Shacabka iyo Ururada Bulshada inay la hadlaan Madaxweynaha inuu dhex-dhexaad ka noqdo Khilaafka, oo ilaaliyo dastuurka dalka iyo ku dhaqankiisa.
Madaxtooyadda Villa Soomaaliya wali kama aysan hadlin eedeynta Jawaari u jeediyay Farmaajo, taasi oo kusoo beegmaysa xilli Xildhibaanada soo gudbiyay Mooshinka ay qorsheynayaan in Maalinta berri ah qabtaan Kulan cod loogu qaadayo Mooshinka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa joojiyay Kulankii Gollaha Shacabka ee Sabtdii lasoo dhaafay, isagoo kulamo dhex-dhexaadin ah la yeeshay dhinacyada iska soo horjeeda ee u dhaxeeya Khilaafka Siyaasadeed.
Warar hoose oo Warsidaha Garowe Online helay ayaa sheegay in kulankoodii ugu dambeeyay ee Farmaajo la qaatey Jawaari usoo bandhigay labo qodob oo lagu xalinayo Khilaafka. Halkan ka akahri Warbixinta.